ပို့ဆောင်ရေး၊ကားအငှားလုပ်ငန်း၊ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီ ရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း တို့တွင် ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။ တည်နေရာကိုသာမက စက်တည်ရှိရာ အနီး တဝိုက် ပေ၃၀ပတ်လည် အတွင်းမှ အသံများကိုလည်း မိမိဖုန်းဖြင့် တိုက်ရိုက်နားထောင်နိုင်ပါသေးသည်။ မိမိ၏ ဇနီးမယား၊ သမီးသားတို့ ဘယ်သွားနေသည်၊ ဘယ်ရောက်နေသည်ကို အတိအကျသိရှိနိုင်ရန်၎င်း၊ မိမိ၏ အရေးကြီး တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် ရောက်ရှိနေသည့်နေရာကို အချိန်နှင့်တပြေးညီသိရှိနိုင်ရန်၎င်း၊ မိမိကားတွင် ဘတ္ထရီဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီးကားသူခိုးကို ခြေရာခံလိုက်ရန်၎င်း နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ဦးတည်ချက်အမျိုးမျိုးဖြင့် တွင်ကျယ်စွာသုံးနေကြပါသည်။ စတင်အသုံးပြုလျှင်............ ဘတ္ထရီကို အားအပြည့်သွင်းပါ။ အမိုးအကာလွတ်သောနေရာ (ကောင်းကင်နှင့် တည့်တည့်ရှိသောနေရာ) တွင် စက်ထဲ GSM ဖုန်းကဒ်ကို သေချာစွာထည့်ပြီးဘတ္ထရီကိုထည့်၊ ON/OFF ခလုတ်ကို ၃စက္ကန့်ခန့်နှိပ်လျှင် မီးနီလေး မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းပါ မည်။ GPS နှင့် ဂြိုဟ်တု ချိတ်ဆက်မိသွားလျှင် စတင်၍ အသုံးပြု နိုင်ပါပြီ။ GPS ထဲတွင် ထည့်ထားသောGSMကဒ်နံပါတ်ကို မိမိဖုန်းဖြင့် CALL ခေါ်ဆိုလိုက်ပါက &quot;ဖုန်းမအားသေးပါ&quot; ဟု ကြားရသည်နှင့် ဖုန်းချလိုက်ပါ။ စက္ကန့်၃၀ခန့်အကြာ တွင် လောင်ဂျီကျု လတ္တီတွဒ်ပါသော link တစ်ခု၊ ကားသွားနှုန်း speed၊ အချိန်၊ နေ့စွဲ၊ IMEIကုဒ်တို့ ပါဝင်သော Message တစ်စောင်ပြန်ဝင်လာပါလိမ့်မည်။ မိမိဖုန်းကို အင်တာနက်လိုင်းဖွင့်၍ ၎င်းLinkနှိပ်လိုက် ပါက GPS၏တည်နေရာကို အတိအကျ ညွှန်ပြပေးပါ လိမ့်မည်။ GPS ထဲမှ ဖုန်းကဒ်ကို အင်တာနက်လိုင်း ဖွင့်ထားရန် မလိုပါ။ ထုထည်ကြီးမားသောအဆောက်အဦးအတွင်း ရောက်နေလျှင်၎င်း၊ GPSနှင့် ဂြိုဟ်တုအကြားတွင် မုန်တိုင်း/လေနီးကြမ်းတို့ ဖြစ်နေလျှင်၎င်း၊ ဘတ္ထရီအား နည်းနေလျှင်သော်၎င်း တည်နေရာပြမှု လွဲချော်နိုင် ပါသည်။ မက်ဆေ့ခ်ျဖြင့် စေခိုင်းရန် မှတ်သားစရာများ sms ဖြင့် စေခိုင်းအသုံးပြုတော့မည်ဆိုလျှင် #begin#123456# ဟု ပို့ပါ။ begin ok ဟု sms ပြန်ဝင်လာမည်။ 123456 သည် password အဖြစ် အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း passwordကို မိမိလိုရာ နံပါတ် (ဥပမာ-987654) ပြောင်းလိုသော် #123456#123456#987654# ဟု ပို့ပါ။ password ok ဟု ပြန်လာမည်။ နောင်တွင် 987654 သာ password အဖြစ်သုံးရပါတော့မည်။ နောက်တကြိမ် password ပြန်ပြောင်းလျှင် #987654#987654#ပက်စ်ဝေါ့အသစ်# ဟု ပို့ရပါမည်။ password မမှတ်မိတော့ပါက #resume# ဟု ပို့လျှင် မူရင်း 123456သာ ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မည်။ (အောက်တွင်ပို့သော sms အားလုံးတွင် password ကို 123456ဖြင့်သာ ပြပါမည်။) စက်ထဲမှ ဖုန်းနံပါတ်ကို အခြားသူများ မသုံးနိုင်အောင် admin ၅ဦးသာ ရွေးချယ်၍ ကန့်သတ်ထား နိုင်ပါသေးသည်။ #admin#123456#09891234567# ဟု ပို့ပါ။ admin ok ဟု ပြန်လာပါမည်။ ထိုအခါ အခြားဖုန်းများဖြင့် စေခိုင်း၍မရတော့ပဲ 09891234567 ဖြင့်သာ စေခိုင်းနိုင်ပါတော့မည်။ 09891234567 နေရာတွင် မိမိအသုံးပြု စေခိုင်းမည့် ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပါ။ ၎င်းနံပါတ်ကို admin အဖြစ်မှဖြုတ်လိုလျှင် #noadmin#123456#09891234567# ဟု ပို့ပါ။ no admin ok ဟု ပြန်လာပါမည်။ စက်အနီးတဝိုက်မှ အသံများ နားထောင်ရန် #monitor#123456# ဟု ပို့ပါ။ monitor ok ဟု ပြန်ဝင်လာလျှင် ဖုန်းခေါ်၍ စက်အနီးတဝိုက် ပေ၃၀အတွင်းမှ အသံများ နားထောင်နိုင်ပါပြီ။ တည်နေရာကို ကြည့်လိုပါက #tracker#123456# ဟု ပို့ပါ။ tracker ok ဟု ပြန်ဝင်လာလျှင် ဖုန်းခေါ်၍ တည်နေရာ Link ကို ရယူနိုင်ပါပြီ။ ဖုန်းမခေါ်လိုလျှင် #smslink#123456#ဟု ပို့လျှင်လည်း တည်နေရာ Link sms ပြန်ဝင်လာပါမည်။ စိတ်ဝင်တစားဖြင့် မရှင်းလင်းသည်များကို မေးလိုပါက (သို့မဟုတ်) ပစ္စည်း မှာယူလိုပါက 09- 777918199, 09- 777918211 တို့ကို ဖုန်းဆက်၍ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်၊ မြို့နယ် နှင့် မှာယူလိုသည့် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် တို့ကို မေးမြန်း မှာယူနိုင် ပါသည်။ ဆိုင်မှာ လာရောက်လေ့လာကြည့်ရှု စမ်းသပ်ပြီး စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မှ ဝယ်ယူလည်း ရပါသည်။ နယ်များမှ မှာယူလျှင် ဘဏ်မှ ငွေကြိုလွှဲရပြီး ငွေလက်ခံရရှိမှသာ ကားဂိတ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးပါ သည်။
GSM Sim Card နှင့် Memory Card ထည့်သုံးရသော သေးငယ်သည့် စွယ်စုံသုံး လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေး ကင်မရာတစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတလွှား ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ၌ပါ အသုံးပြုနေဆဲ အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ရေ/ဆီသဲဝင်ခြင်း၊ အားသွင်းစဉ် မီးအားဆောင့်တက် ၍လောင်ကျွမ်းခြင်း၊ လွတ်ကျကွဲရှပျက်စီးခြင်း၊ ဖွင့်လှပ် ပြုပြင်ထားခြင်း၊ အပူချိန်များသည့်နေရာတွင် ကြာရှည်ထားမိပြီး ဘတ္ထရီချို့ယွင်းခြင်းတို့မှလွဲ၍ ၁ နှစ်အတွင်း ပျက်စီးချို့ယွင်းပါက အခမဲ့ ပြုပြင်/ လဲလှယ်ပေးပါမည်။ မိမိ၏ ရုံးခန်း၊ နေအိမ်၊ ဂိုထောင်၊ အရေးကြီးပစ္စည်း ထားရာ အခန်း၊ မော်တော်ကား၊ မီးခံသေတ္တာတို့အနီးတွင် လျှို့ဝှက်တပ်ဆင်ထားလိုက်ပါက မိမိ၏ ဟမ်းဖုန်းဖြင့် မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးသော နေရာမှပင် ၎င်းကင်မရာကို လိုသလို စေခိုင်း ထိန်းချုပ် နိုင်ပါသည်။ မိမိ၏ အခန်းတွင်းသိုိ့မသိအောင် တစုံတယောက် ဝင်ရောက်လာပါက အသံကြားလျှင်ကြားချင်း မိမိ၏ဖုန်းသို့ call ခေါ်ပေးခြင်း၊ message ပို့ပေးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ် ပေးရန် စေခိုင်နိုင်ပါသည်။ တန်ဖိုးကြီး ကားပေါ်တွင် လျှို့ဝှက်စွာ ထားထားပါက ကားခိုးသူ စက်နှိုးလိုက်သည်နှင့် မိမိ၏ဖုန်းသို့ call ခေါ်ပေးခြင်း၊ message ပို့ပေးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ခိုင်းစေနိုင်ပါသည်။ ကားရောက်နေသည့်နေရာ (ခန့်မှန်း) ကိုလည်း သိရှိနိုင်ပြီး ကားအတွင်း ပြောနေသည့်စကားသံများကိုလည်း တိုက်ရိုက် ကြားသိနိုင်သဖြင့် ကားလုံခြုံရေးအတွက် အထူးအဆင်ပြေပါသည်။ အသံအတိုးအကျယ်ကိုလည်း 8dbမှ 255db အထိ လိုသလိုချိန်ညှိထားနိုင်ပါသည်။အနည်းငယ်မြည်သံကြား ရုံဖြင့် callခေါ်ပေးခြင်း၊ အလွန်ကျယ်လောင်သော အသံကြားမှ call ခေါ်ပေးခြင်း တို့ကို မိမိဖုန်းမှ message ပို့ပေးရုံဖြင့် လိုသလိုချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။ မိမိဟမ်းဖုန်းဖြင့် ( မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖုန်းလိုင်းမိ သည့် မည်သည့်နေရာမှမဆို ) ၎င်းကင်မရာကို ဓာတ်ပုံရိုက် ခိုင်းခြင်း၊ ဗီဒီယိုရိုက်ခိုင်းခြင်း၊ အသံဖမ်းခိုင်း ခြင်းတို့ကိုလည်း စေခိုင်းနိုင်ပါသေးသည်။ Video ကို ကြည်လင်ပြတ်သားသော HD ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ပေးပြီး ၎င်းကင်မရာအနီး ပေ၃၀ပတ်လည်အတွင်းမှ 60db အဆင့်ရှိ အသံများကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ဖမ်းယူ ပေးထားနိုင်ပါသည်။ ပြန်လည်ကြည့်ရှုနားထောင်လိုပါက ၎င်းကိရိယာထဲ ထည့်ထားသော memory card ကိုဖြုတ်၍ ကွန်ပျူတာ၊ လက်ပ်တော့၊ smart phone တို့ဖြင့် ပြန်လည်ကြည့်ရှုနားထောင်နိုင်ပါသည်။ ☎ spy X009 ထဲတွင်ထည့်ထားသော sim card နံပါတ်ကို မိမိဖုန်းဖြင့် ခေါ်ဆိုလိုက်ပါက စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ၎င်း X009 အနီး ပေ၃၀ပတ်လည်အတွင်းမှ အသံများကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ တိုက်ရိုက်နားထောင်နိုင်ပါသည်။ GPRS စနစ်ရှိသော နိုင်ငံများတွင် ၎င်း X009 ကင်မရာမှ ဓာတ်ပုံများကို မိမိ၏ဖုန်းဖြင့် မိုင်ပေါင်းများစွာမှနေ၍ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကား ယခုအချိန်အထိ GPRS စနစ် မရှိသေးသောကြောင့် တိုက်ရိုက် မကြည့်ရှုနိုင်သေးပါ။ SOS ပို့ရုံဖြင့် ၎င်းစက်၏ တည်နေရာ၊ ဘတ္ထရီလက်ကျန်အား၊ ဖုန်းလိုင်းမိသည့် ရာခိုင်နှုန်း IMEI ကုဒ် စသည်တို့ကိုလည်း သိရှိနိုင်ပါသေးသည်။ မက်ဆေ့ခ်ျ စာတိုပို့ စေခိုင်းရန် ကုဒ်များ 000
Key Features • 1/3” DIS • 700 TVL horizontal resolution • 2.8 – 12mm vari-focal lens • True Day/Night • Up to 40m IR distance • Smart IR mode • IP66 weatherproof • Wide operating temperature range လူကြီးမင်းတို့၏ ရုံးခန်း၊ စက်ရုံ၊ အိမ်များကို ၂၄နာရီပတ်လုံးစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော HIK VISION CCTV လုံခြုံရေးသုံးပစ္စည်းကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့နယ်အတွင်းမှာယူမယ်ဆိုပါက ၂၄နာရီအတွင်း ဆိုဒ်အထိတပ်ဆင်ပေးပြီး နယ်မှ မှာယူလိုပါက ကားဂိတ်အထိပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
Key Features •	1.3 Megapixel high-performance CMOS •	Analog HD output, up to 720P resolution •	True Day/Night •	DNR, Smart IR •	EXIR technology, up to 40m IR distance •	IP66 weatherproof လူကြီးမင်းတို့၏ ရုံးခန်း၊ စက်ရုံ၊ အိမ်များကို ၂၄နာရီပတ်လုံးစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော HIK VISION CCTV လုံခြုံရေးသုံးပစ္စည်းကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့နယ်အတွင်းမှာယူမယ်ဆိုပါက ၂၄နာရီအတွင်း ဆိုဒ်အထိတပ်ဆင်ပေးပြီး နယ်မှ မှာယူလိုပါက ကားဂိတ်အထိပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
Key features • HD1080P Video Output • Adopt HDTVI Technology • True Day/Night, Smart IR • Up to 20m IR distance • Vandal proof • OSD menu controlled via UTC လူကြီးမင်းတို့၏ ရုံးခန်း၊ စက်ရုံ၊ အိမ်များကို ၂၄နာရီပတ်လုံးစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော HIK VISION CCTV လုံခြုံရေးသုံးပစ္စည်းကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့နယ်အတွင်းမှာယူမယ်ဆိုပါက ၂၄နာရီအတွင်း ဆိုဒ်အထိတပ်ဆင်ပေးပြီး နယ်မှ မှာယူလိုပါက ကားဂိတ်အထိပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
Key features • 700 TVL Horizontal Resolution • True Day/Night • 2.8/3.6/6mm Fixed Lens, 0.1 lux /F1.2 • 20m IR Distance • Wide Operating Temperature Range: -40°C to 60°C(-40ºF to +140ºF) လူကြီးမင်းတို့၏ ရုံးခန်း၊ စက်ရုံ၊ အိမ်များကို ၂၄နာရီပတ်လုံးစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော HIK VISION CCTV လုံခြုံရေးသုံးပစ္စည်းကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့နယ်အတွင်းမှာယူမယ်ဆိုပါက ၂၄နာရီအတွင်း ဆိုဒ်အထိတပ်ဆင်ပေးပြီး နယ်မှ မှာယူလိုပါက ကားဂိတ်အထိပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
HD720P Vari-focal IR Bullet Camera • 1.3 Megapixel high-performance CMOS • Analog HD output, up to 720P resolution • True Day/Night • 2.8 - 12mm vari-focal lens • DNR, Smart IR • Up to 40m IR distance • IP66 weatherproof လူကြီးမင်းတို့၏ ရုံးခန်း၊ စက်ရုံ၊ အိမ်များကို ၂၄နာရီပတ်လုံးစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော HIK VISION CCTV လုံခြုံရေးသုံးပစ္စည်းကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့နယ်အတွင်းမှာယူမယ်ဆိုပါက ၂၄နာရီအတွင်း ဆိုဒ်အထိတပ်ဆင်ပေးပြီး နယ်မှ မှာယူလိုပါက ကားဂိတ်အထိပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
700TVL DIS and EXIR Mini Dome Camera • 1/3&#039;&#039; DIS • 700TVL high resolution • EXIR 20m • True day / night • Smart IR • IP66 rating • 2.8/3.6/6/8 mm Fixed Lens, 0.1 lux /F1.2 • 20m IR Distance • Wide Operating Temperature Range: -40°C to 60°C(-40ºF to +140ºF) လူကြီးမင်းတို့၏ ရုံးခန်း၊ စက်ရုံ၊ အိမ်များကို ၂၄နာရီပတ်လုံးစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော HIK VISION CCTV လုံခြုံရေးသုံးပစ္စည်းကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့နယ်အတွင်းမှာယူမယ်ဆိုပါက ၂၄နာရီအတွင်း ဆိုဒ်အထိတပ်ဆင်ပေးပြီး နယ်မှ မှာယူလိုပါက ကားဂိတ်အထိပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
ရုပ်ထွက်အနေနဲ့ 1.3 Mega Pixel ရှိတာကြောင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသော ရုပ်ထွက်ကို ဖမ်းယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ကင်မရာ Lens 3.6 mm ရှိပြီး မြင်ကွင်းကတော့ 90 Degree / 60 Degree ချိန်ညှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် နေ့နဲ့ည အကူးအပြောင်းမှာ အလင်းမရှိပဲ ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ IR ခေါ် Inf-red ရောင်ခြည်ထွန်းညှိပေးသော LED မီးသီး 48 Pcs ပါဝင်တဲ့အတွက် ညအမှောင်ထဲမှာ အလင်းမရရှိသော်လဲ 20-25 မီတာ အကွာအဝေးထိ ရိုက်ကူးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့နဲ့ည ပြောင်းလဲချိန်မှာ ချိန်ညှိပေးစရာမလိုတဲ့ Auto Switch ပါဝင်တဲ့အတွက် အလိုအလျှောက် ပြောင်းလဲပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် မီးအားကလဲ DC 12V / 1000mA သာသုံးစွဲရတဲ့အတွက် မီအားလဲ သိပ်မသုံးရပါဘူး မီးအားအတက်အကျ အတွက် Adapter ကောင်းကောင်း တစ်လုံးလဲ ပါဝင်တာကြောင့် ပိုမိုစိတ်ချရပါတယ်။
ရုပ်ထွက်အနေနဲ့ 1/2.9&quot; 2.2 Mega Pixel ရှိတာကြောင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသော ရုပ်ထွက်ကို ဖမ်းယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ကင်မရာ Lens 2.8-11 mm ရှိပြီး မြင်ကွင်းကတော့ 90 Degree / 60 Degree ချိန်ညှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် နေ့နဲ့ည အကူးအပြောင်းမှာ အလင်းမရှိပဲ ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ IR ခေါ် Inf-red ရောင်ခြည်ထွန်းညှိပေးသော LED မီးသီး 48 Pcs ပါဝင်တဲ့အတွက် ညအမှောင်ထဲမှာ အလင်းမရရှိသော်လဲ 20-25 မီတာ အကွာအဝေးထိ ရိုက်ကူးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့နဲ့ည ပြောင်းလဲချိန်မှာ ချိန်ညှိပေးစရာမလိုတဲ့ Auto Switch ပါဝင်တဲ့အတွက် အလိုအလျှောက် ပြောင်းလဲပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် မီးအားကလဲ DC 12V / 1000mA သာသုံးစွဲရတဲ့အတွက် မီအားလဲ သိပ်မသုံးရပါဘူး မီးအားအတက်အကျ အတွက် Adapter ကောင်းကောင်း တစ်လုံးလဲ ပါဝင်တာကြောင့် ပိုမိုစိတ်ချရပါတယ်။
ရုပ်ထွက်အနေနဲ့ PAL:1920*1080 Pixel ရှိတာကြောင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသော ရုပ်ထွက်ကို ဖမ်းယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ကင်မရာ Lens M12 ရှိပြီး မြင်ကွင်းကတော့ 90 Degree / 60 Degree ချိန်ညှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် နေ့နဲ့ည အကူးအပြောင်းမှာ အလင်းမရှိပဲ ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ IR ခေါ် Inf-red ရောင်ခြည်ထွန်းညှိပေးသော LED မီးသီး 48 Pcs ပါဝင်တဲ့အတွက် ညအမှောင်ထဲမှာ အလင်းမရရှိသော်လဲ 20-25 မီတာ အကွာအဝေးထိ ရိုက်ကူးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့နဲ့ည ပြောင်းလဲချိန်မှာ ချိန်ညှိပေးစရာမလိုတဲ့ Auto Switch ပါဝင်တဲ့အတွက် အလိုအလျှောက် ပြောင်းလဲပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် မီးအားကလဲ DC 12V / 1000mA သာသုံးစွဲရတဲ့အတွက် မီအားလဲ သိပ်မသုံးရပါဘူး မီးအားအတက်အကျ အတွက် Adapter ကောင်းကောင်း တစ်လုံးလဲ ပါဝင်တာကြောင့် ပိုမိုစိတ်ချရပါတယ်။
Hi-View HA-55D13 AHD CCTV camera သည် 1.3 megapixel ရုပ်ထွက်ရှိပြီး SONY Sensor အသုံးပြုထားခြင်းကြောင့်ကြည်လင်ပြတ်သားသောပုံရိပ်များကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ငွေရှင်းကောင်တာများနှင့်အရေးကြီးနေရာများတွင်တပ်ဆင်ရန်အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
Panasonic WV-CS580 CCTV
Panasonic WV-CS580 is an all-in-one 24-hour surveillance camera that features 36x zoom and super dynamic6technology. It has video motion detector (VMD) with mask 8 x6areas. It also has4alarm inputs and2outputs terminal. Its alarm actions include terminal output, camera positioning, auto pan, patrol, SEQ, sort, auto track, B/W and command output.
Panasonic WV-CW590 CCTV
WV-CS590 isa650 TVL X360 zoom day/night dome camera with adaptive digital noise reduction. It has auto image stabiliser for applications where vibration or wind isaconcern. It also has 256 preset positions that can be activated from the system controller withaswitcher or recorder. Additionally, it has VMD (Video Motion Detector) with mask 8 x6areas.
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce platform to buy Security &amp; Safety in Myanmar. You can buy and sell safety key storage box in Myanmar.You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. If you cannot find what you want, you can post buying offer in relevant categories. Many suppliers will send you quotations. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<br></p>